Saturday, 25 January, 2020 | २०७६ माघ ११ गते , शनिवार
सूर्यलाई नजिकबाट बुझ्ने कोशिशकै बीच सूर्य ग्रहण
२०७६ पौष ९ गते , बुधवार प्रकाशित
मानिसले आदि कालदेखि नै बिभिन्न किसिमले सूर्यको उपासना गर्दै आएको छ । यसका पछाडि ठोस कारणहरु पनि छन् । पहिलो प्रष्ट कुरा त के हो भने यही सूर्यले नै हाम्रो पृथ्वीमा जीवनको सञ्चालन गर्दछ । १५ करोड किलोमिटर टाढा भएर पनि सूर्यले प्रकाशकोरुपमा ऊर्जा र उष्मा पृथ्वीलाई प्रदान गरिरहेको छ । पृथ्वी र अन्तरिक्षबाट सञ्चालित अत्याधुकि दुर्बिनहरुले सूर्यको अहिले ब्यापक अध्ययन गरेका छन् । तर हाम्रो यो सौर्य मण्डलको महानायक सूर्यका बारेमा अझै पनि धेरै कुराहरु जान्न बाँकी नै छ । यसै कारणले अमेरिकी खगोल अध्ययन केन्द्र — नासा—ले हालैमा सूर्य तर्फ एउटा महत्वाकांक्षी मिशन पठाउने योजना बनाएको छ । त्यो मिशन सूर्य–‘सोलर प्रोब’ लाई आउदो बर्ष २०२०मा सञ्चालनमा ल्याइने बताइएको छ ।
हुन त पहिला यो मिशानको नाम सोलार प्रोब प्लस राखिएको थियो । अहिले त्यसलाई बदलेर ‘सोलर प्रोब’ बनाइएको छ । यसो गरिनुको कारण भौतिकबिज्ञ यूजीन पार्करलाई सम्मानका लागि भनिएको छ, जसले यो सूर्यबाट निस्कने ऊर्जा कण अर्थात् ‘सोलर वीण्ड’का सम्बन्धमा महत्वपूर्ण अध्ययन गरेका थिए । हुन त सूर्यको खोजबिनका लागि यो भन्दा पहिला पनि अनेक मिशनहरु पठाइसकिएका छन् । १९७६ मा हेलियोस् २ मिशन सूर्यको वायु मण्डल भन्दा केवल ४.३ करोड किलोमिटर टाढा रहेको थियो । तर १.५ अर्ब डलरको लागत लाग्ने पार्कर मिशन सूर्यको सतहबबाट मात्र ६० लाख किलोमिटर परसम्म पुग्ने बताइएको छ । अन्य यस्ता मिशनहरुको तुलनामा यो यान सूर्यको नौ गुणा जति नजिक हुने छ ।
यो मिशनको सेन्सरले पहिलो पटक सूर्यमा हुन गइरहेका प्रकृयाहरुका सम्बन्धमा पत्तो लगाउने र त्यसको बिश्लेषण गर्न सक्ने बताइएको छ । यद्यपि सूर्यको धेरै नजिक भएका कारणले त्यो यानले प्रचण्ड गर्मी झेल्नुपर्ने हुन्छ । त्यहा तापमान १४०० डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुग्न सक्तछ । त्यसैले, यानका संबेदनशील उपकरणहरुलाई तीब्र उष्माबाट बचाउनका लागि कार्बन कम्पोजिटबाट बनेका ११.५ सेण्टिमिटर मोटो आवरणको प्रयोग गरिने भनिएको छ । त्यो प्रचण्ड तापमानमा अन्तरिक्ष यानलाई ऊर्जा प्रदान गर्ने सोलार प्यानलले आफुलाई समेट्ने छ । यस कसरतबाट यानका उपकरणहरु र ऊर्जा श्रोत कायम रहेको तापक्रममा रहिरहनेछन् । यसका अतिरिक्त अन्तरिक्ष यानलाई पृथ्वीको कक्षको तुलानामा ४७५ गुणा बढी रेडिएशन पनि झेल्नुपर्ने हुन्छ ।
यहाँ प्रश्न स्वाभाविकरुपमा के उठ्न सक्छ भने यत्रो जोखिम भरिएको मिशन हामी मानिसलाई के काम लग्छ ? सूर्यबाट उड्ने ऊार्जाबान कणहरुको आँधी पृथ्वीका लागि भयंकर ठूलो खतरा बन्न सक्तछन् । अन्तरिक्षको बिषम मौसमको अध्ययन गर्ने र गरिरहेका बिशेषज्ञहरुको के भनाई छ भने प्रचण्ड सौर्य आँधीको सामना गर्न अत्यन्तै चूनौतिपूर्ण हुनेछ । १८८९ को सौर्य आँधीबाट यूरोप र उत्तरी अमेरिकामा टेलिग्राफ तारहरुलाई अस्तब्यस्त तुल्याइदिएको थियो र त्यसबाट धेरै ठाउँमा आगलागी भएको थियो । यदि आजको दिनमा त्यस्तो आँधीको सामना गर्नप¥यो भने त्यसमा असर अझ ब्यापक हुनेछ । किनभने आज हाम्रो पृथ्वीमा बिद्यूत र दूरसञ्चार सञ्जाल धेरै उन्नत र बढी बिस्तार पनि भइसकेको छ । बितेको शताब्दीको तुलनमा आज हामी यस्तो आँधीको अगाडि अझ बढी बिवश रहेकाछौं । यस कारणले कि हाम्रो समस्त जीवन पद्धति आज इलेक्ट्रोनिक्समा आधारित बनिसकेको छ ।
सबैभन्दा पहिला यस्तो आँधीको शक्तिशाली बिद्यूतीय चुम्बक तरंगहरुको चपेटामा दूरसञ्चार उपग्रहरु पर्नेछन् जुन हाम्रो आधारभूत पूर्वाधार (इन्फ्रा स्ट्रक्टचर)का महत्वपूर्ण तत्वहरु हुन् । तिनमा बिद्यूत ग्रीडहरु, मोबाइल फोट नेटवर्क र नयाँ ४जी ५जी नेटवर्कहरुमा ठूलो नोक्सान हुन सक्तछ । बृटेनमा यस प्रकारका बिनाशकारी बिद्यूतचुम्बकीय आँधीबाट हुने गरेको नोक्सानीको मूल्य ४००० अर्ब पाउण्ड आकलन गरिसकिएको छ । नयाँ सोलार मिशन सञ्चालबाट पहिलो पटक सूर्यको चुम्बकीय क्षेत्रहरु र वायुमण्डलीय तापमानहरुको प्रत्यक्ष नापजोख गर्नमा मद्दत पुग्नेछ । यसबाट बैज्ञानिकहरुलाई के थाहा हुन्छ र के बुझ्न मद्दत पुग्दछ भने सूर्यको वायुमण्डलमा कुन परिस्थिति हुँदा त्यहाँ बिषम सौर्य आँधीको उत्पत्ति या जन्म हुन्छ ?
अहिले हामी पृथ्वीबासीसँग सूर्यको चुम्बकीय क्षेत्रको प्रत्यक्ष अध्ययनको कुनै तरीका बिकसित भएको छैन । सौर्य आँधीका बारेमा अग्रिम चेतावनी दिन सौर्य बायुमण्लीय परिस्थितिका बारेमा चौबिसै घण्टा अनुगमन र निगरानी राख्न आवश्यक छ ।यस मिशनमा सूर्यबाट प्रभावित हुने किसिमका ऊर्जाउपकरणको प्रवाहका प्रभावहरुको सही सही आकलनबाट भबिष्यका अन्तरिक्ष यात्रा र यानहरुको अझ गहिराईमा पुग्नका लागि यो सौर्य अभियानको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकिनेछ । यसै ताका सूर्य ग्रहणको प्रभाव र परिणतिको पनि गहिराईपूँर्ब अध्ययन हुन सक्को भने त्यसले पनि मानब जातिको सेवामा अझ थप योगदान पुग्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्वको छ र हुन्छ ।बैज्ञानिकरुको धयान यसतर्फ पनि जानु पर्दछ र जानसक्छ भन्ने अनुमान गरिदैछ।
राज्य र सहकारीबीच सहकार्यले मात्र समृद्धि सम्भव
बचत होइन पूँजीको आधारमा लगानी गर्ने विषयमा बहुउद्देश्यीय सहकारी सहमत छन्
सहुलियत र प्रोत्साहन बिना सहकारीमा एकिकरण कठिन
बिन्धबासिनी साकोसले सिर्जनशील साकोसलाई एकिकरण गर्ने
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(मार्क्सबादी) एकता सम्पन्न
चमेली कल्याणकारीले सदस्यहरुको दुर्घटना बीमा गर्ने
सांसद अभिषेक प्रताप शाह बिरुद्ध अबरुद्ध सडक
सत्ताधारी नेकपाको मुस्लिम संगठनको सपथ
तपाईं हाम्रो बहुउद्देश्यीयको १२औं वार्षिक साधारण सभाबाट अध्यक्षमा थापा
महान क्रान्तिकारी मार्क्सबादी नेता माओको स्मरणमा !
नेपालमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमित रोगी भएको पुष्टी
कोरोना भाइरसले गर्दा चीनका बिभिन्न शहरमा यातायातमा बन्देज
प्रातस्मरणीय चार अमरशहीदहरुप्रति हार्दिक शब्द श्रद्धाञ्जली !
बीर शहीदहरुलाई उच्च सम्मानकसाथ नमन !